Izindaba - Ukuhlaziywa Kwesimo Samanje Nentuthuko Okulindelekile Kwimboni Yamathuluzi Kagesi
Ngokuthuthuka kokuhwebelana kwembulunga yonke kwezomnotho kanye nokuthuthuka okusheshayo kwemakethe yamathuluzi kagesi, i-Intanethi iguqule imodeli yebhizinisi yezimboni eziningi zendabuko eminyakeni edlule. Njengomkhakha wendabuko, amathuluzi kagesi nakanjani kufanele amukele inselelo ye-Intanethi. Izinkampani eziningi zamathuluzi kagesi zamukela imakethe ye-e-commerce ngemizamo yokugwema ukuthikamezeka kwamamodeli wokumaketha. Okwamanje, imboni enkulu yamathuluzi kagesi ayinayo inhlanhla yokuba yingxenye ekhuluphele ye-e-commerce ethuthukayo.
Izinsuku zamanje Amathuluzi kagesi ukuguqulwa kwe-e-commerce e-china kungabonakala kuyo yonke indawo, eminyakeni yokuqala ngokusungulwa kwesikhulumi sabo se-e-commerce, ngoba ukusetshenziswa kwabasebenzi, inhlokodolobha kuphakeme kakhulu, futhi akukwazi ukufinyelela ukugeleza okulindelekile, kwaqala ukushiywa kancane kancane, njengamanje kungxenyekazi yesithathu ye-B2C e-commerce, njengeTmall, JingDong, Su Ning, Amazon njalonjalo. Inzuzo yokungena emakethe ye-e-commerce isendleleni yamathuluzi kagesi nge-Intanethi ukushintsha ukukhiqizwa kwawo, ukuphathwa, ukuthengisa nezinye izixhumanisi, ukuze amabhizinisi amathuluzi wamandla amancane naphakathi nendawo athole amabhizinisi ukuthola amathuba amaningi, ikusasa ku izandla zabo.
Liyini ikusasa lamathuluzi kagesi?
1. njengenye yamathuluzi okufaka isicelo ajwayelekile, amathuluzi kagesi angatholakala yonke indawo, njenge-drill kagesi, i-chainsaw, umshini wokusika, i-angle grinder njalonjalo. isetshenziswa kabanzi, kufaka phakathi imboni yemishini, ukuhlobisa izakhiwo, ukuhlobisa indawo, ukucubungula izinkuni, ukucubungula imali nokunye, okudlala indima ebaluleke kakhulu ekuthuthukisweni komphakathi nezomnotho. Njengezwe elikhulu kunawo wonke asathuthuka eChina, amathuluzi kagesi ahlukaniswe njengemboni yokukhiqiza imishini esezingeni eliphakeme.
2. umqondo wokuthenga nge-inthanethi ugxilile ezinhliziyweni zabantu, amathuluzi kagesi anemodeli yokuthengisa ye-e-commerce, azokhuphula uketshezi lomkhiqizo, ongasenamikhawulo ekuthengisweni kwezifunda, ngasikhathi sinye, ukwaziswa komkhiqizo ngamabhizinisi futhi kwenziwe ngcono, ukwethulwa kwamapulatifomu avela eceleni.
3. kuhlomula ekuqhamukeni kobuchwepheshe be-lithium, amathuluzi kagesi aguqulwa kancane kancane ahlanzeke amandla kagesi, umthamo webhethri nokuphepha kwamathuluzi kagesi kulindeleke ukuthi athuthukiswe kakhulu, futhi izindleko zebhethri zehliswe njalo. Ngokwanda kwesilinganiso sokwanda emndenini, amathuluzi kagesi adinga ukwenza ukusetshenziswa okuhlukahlukene, ukuqhamuka kobuchwepheshe bokulawula i-elekthronikhi, amathuluzi ahlakaniphile emndenini, amandla okuthuthuka embonini makhulu.